3 ရက်များအတွက်အစားအသောက် kefir - ကိုယ်အလေးချိန်များအတွက်မီနူး / ဆေးတောင့် KETO Complete
ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့နဲ့ မုန်းတီးတဲ့ ကီလိုဂရမ်တွေကို ဖယ်ရှားဖို့၊ သင့်အစားအသောက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ကယ်လိုရီနည်းတဲ့ အစားအစာကို ရွေးချယ်ရပါမယ်။ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန် ထိရောက်သောနည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။3 ရက်အတွက် Kefir အစားအစာသည်အခြားသူများကြားတွင်အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုပြသသောပထမနေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Kefir ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းနည်းစနစ်သည် ၃ ရက်တာအတွက်5ကီလိုဂရမ်ထက် ပိုကျစေပါသည်။ထိုကဲ့သို့သော မိုနိုအစားအသောက်သည် လွန်ကဲသောအမျိုးအစားတွင် ပါဝင်သည်။
ရလဒ်ရရှိရန်၊ အကြံပြုချက်များကို လိုက်နာရပါမည်။
တစ်နေ့လျှင် အဆီ 1% ရှိသော kefir သို့မဟုတ် whey 1.5လီတာသာသောက်ပါ။
24 နာရီအတွင်းရေ 1.5လီတာသောက်;
သကြား၊ ဆား၊ ဘယ်ရီသီးနှင့် စပျစ်သီးများကို မစားသုံးပါနှင့်။
သုံးရက်ကြာ kefir အစားအစာအတွင်းရှုပ်ထွေးသောဗီတာမင်များကိုသုံးပါ။
kefir အစားအစာနှင့်အတူ၊ သင်သည်သာမန်အစားအစာကိုမစားနိုင်ပါ။ခြွင်းချက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်- ပြုတ်ထားသော ကြက်ရင်အုံ၊ oatmeal၊ အဆီနည်းသော အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ၊ ပန်းသီး၊ လိမ္မော်သီး၊ ငှက်ပျောသီး သို့မဟုတ် ကီဝီသီး။
3 ရက်အတွင်း kefir အစားအသောက်အပေါ်ကိုယ်အလေးချိန်ဘယ်လိုလျှော့ချမလဲ။
kefir 1% ကို "ထိုင်" နှင့်ရေများများသောက်ရန်3ရက်လုံးလိုအပ်သည်။ခန္ဓာကိုယ်ကို လုံးဝချွတ်ပြီး ကီလိုအနည်းငယ် ဆုံးရှုံးနိုင်စေရန်အတွက် ပုံမှန်မီနူး၏ ထုတ်ကုန်များကို မေ့ထားရန် အကြံပြုထားသည်။
kefir သုံးစွဲမှုကို ရေ သို့မဟုတ် အချိုမပါတဲ့ mint လက်ဖက်ရည်နဲ့ အစားထိုးပြီး ကယ်လိုရီနည်းတဲ့ kefir 1.5လီတာကို 5-6 ကြိမ် ခွဲပေးသင့်ပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းက ၃ ရက်အတွင်း ၄-၅ ကီလိုဂရမ်ကို ဖယ်ရှားနိုင်စေတယ်။
Kefir နည်းပညာသည် ထုတ်ကုန်၏ ဤကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်များကြောင့် ထိရောက်မှုရှိသည်။
ဝမ်းနုတ်ဆေး အာနိသင်သည် အူများကို သန့်စင်စေသည်။
သိမ်းဆည်းထားသော အရည်များကို ဖယ်ရှားခြင်း၊
အတွင်းပိုင်းညစ်ညမ်းမှုနှင့် slagging မှလွတ်မြောက်;
အစာခြေလမ်းကြောင်းနှင့် excretory system ကိုပုံမှန်ဖြစ်စေသည်။
kefir တွင်ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။အချိန်တိုအတွင်း ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေရန်အတွက်၊ ပိုမို "ခက်ခဲသော" အစားအသောက်ရွေးချယ်မှုများကို အကြံပြုထားသည်။
မနက်စာ၊ နေ့လယ်စာ၊ နေ့လည်စာ၊ ညစာ ဆိုပြီး အစားအသောက် ၄ မျိုးကို ခွဲထားပါတယ်။
ရွေးချယ်မှု နံပါတ် ၁
အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ 100 ဂရမ်;
kefir 200 ml ကို;
kefir ၏တစ်ဝက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်အတူ oatmeal3ဇွန်း၊ အချဉ်ဖောက်ဖုတ်နို့သို့မဟုတ်ဒိန်ချဉ် 1% ။
0.5kefir;
ပြုတ်ကြက်သားရင်သား 200 ဂရမ်;
အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ 100 ဂရမ်။
ရွေးချယ်မှု နံပါတ် ၂
Kefir တိုဟူး အစားအသောက် ၃ ရက်
နေ့ဘက်တွင်၊ အဆီနည်းသောအိမ်တွင်းဒိန်ခဲ 500 ဂရမ် (5 ကြိမ်အတွက်);
အချိုမပါသော ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ လက်ဖက်ရည်နှင့် ဓာတ်သတ္တုရေကို ဓာတ်ငွေ့မပါဘဲ သောက်နိုင်သည်။
နို့ချဉ် ၁. ၅ လီတာ သောက်ပြီး ၆ ကြိမ် ခွဲပြီး နေ့ စဉ် သောက်ပါ။
နံနက်စာ - အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ 100 ဂရမ်;
သရေစာ - စိမ်ထားသောနို့ထုတ်ကုန် 200 ဂရမ်;
နေ့လည်စာ - အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ 100 ဂရမ်;
ညစာ - kefir ။
ဤပေါင်းစပ်နို့ထွက်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များအလေးချိန်ဆုံးရှုံးသွား၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်။24 နာရီအတွင်းရေ 1.5လီတာနှင့်လက်ဖက်ရည်သောက်ပါ။ထိုကဲ့သို့သော အစားအစာများကို ပြုပြင်ခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်က ရရှိသည်ထက် ကယ်လိုရီပိုထုတ်ပေးသည်။ထို့အတွက်ကြောင့် ကီလိုဂရမ်ပိုလောင်ကျွမ်းသွားပါသည်။
ရွေးချယ်မှု နံပါတ် ၃
သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက် kefir အစားအသောက် ၃ ရက်
သူမ၏ အစားအသောက်ကို ၎င်း၏ နူးညံ့မှုဖြင့် ခွဲခြားထားသည်။ဤရွေးချယ်မှုသည် လူတိုင်းအတွက် သင့်လျော်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ပုံမှန်အစားအစာကို Spartan ငြင်းပယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
အစားအသောက်နေ့တွင်သင်စားနိုင်သည် - သစ်သီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ။အထူးသဖြင့် ဂရုပြုသင့်သည်- တရုတ်နံနံ၊ သခွားသီး၊ zucchini၊ ဖရဲသီး၊ နာနတ်သီးနှင့် လိမ္မော်သီးများ။
ဤကာလအတွက် မီနူးမှ ဖယ်ထုတ်သင့်သည်- ငှက်ပျောသီး၊ စပျစ်သီး (ကယ်လိုရီများလွန်း) နှင့် အာလူး (ကစီဓာတ်များသော)။
3 နာရီတစ်ကြိမ် > သောက်ပါ။နို့ချဉ်တစ်ခွက် ၁% သောက်ပါ။စတော်ဘယ်ရီ၊ ရက်စ်ဘယ်ရီ၊ စတော်ဘယ်ရီ စသဖြင့် ကော့တေးပုံစံနဲ့ သောက်နိုင်ပါတယ်။ခုတ်ထစ်ထားသောဇီယာစေ့၊ နံနံပင်၊ သခွားသီးနှင့် ကြက်သွန်နီတို့ဖြင့် ကော့တေးသောက်ရန် အသုံးဝင်သည်။
သုံးရက်စာ Menu (နံနက်စာ၊ သရေစာ၊ နေ့လည်စာ၊ ညစာ)
စတော်ဘယ်ရီ ကော့တေး (kefir + စတော်ဘယ်ရီသီးကို Blender ထဲတွင် ရောနှောပါ);
လတ်ဆတ်သောဂေါ်ဖီထုပ်, အစိမ်းရောင်, သံလွင်ဆီနှင့်အတူရာသီ;
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူဒိန်ခဲ 80 ဂရမ်;
ပြုတ် beetroot သန့်စင်သော;
ပန်းသီး-kefir အစားအစာသည် မလိုအပ်သော ကီလိုဂရမ်များကို ဖယ်ရှားပြီး အချိန်တိုအတွင်း ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချလိုသူများအတွက် အခိုင်မာဆုံးနှင့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ စားသုံးရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ထိုကဲ့သို့သော kefir ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသည့်နည်းလမ်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန်မှာ ဆာလောင်မှုအဆက်မပြတ်ခံစားရခြင်းကြောင့် မလွယ်ကူပါ။
ဤပေါင်းစပ်ထုတ်ကုန်သည်သင့်အားတစ်ပတ်လျှင် 7-9 ကီလိုဂရမ်မှလွတ်မြောက်စေလိမ့်မည်။ဒီအစားအစာကနေ၊ ပုံမှန်အတိုင်းပြန်သွားဖို့လွယ်ပြီး ပိုနေတဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကို ချက်ချင်းမတက်စေပါဘူး။
ဤ kefir အစားအစာသည်သင့်အားခွင့်ပြုသည်-
အူများကိုသန့်ရှင်းစေပြီး microflora ၏အခြေအနေကိုတိုးတက်စေသည်၊ ၎င်း၏အလုပ်ကိုပုံမှန်ဖြစ်စေသည်။
အဆိပ်အတောက်များ၊ အဆိပ်အတောက်များနှင့် အခြားအပျက်အစီးများ ကင်းစင်ခြင်း၊
အာရုံကြောစနစ်ကို ညှိပေးကာ တင်းမာမှုကို သက်သာစေသည်။
24 နာရီအတွင်း ပန်းသီးတစ်လုံးသာစားနိုင်ပြီး kefir ဖျော်ရည်၊ ရေ၊ ရေနွေးကြမ်းတို့ကို သောက်နိုင်ပါတယ်။မီနူးတွင် kefir တစ်ခွက်မသောက်မီ နာရီဝက်အလိုတွင် ပန်းသီးတစ်လုံးစားနိုင်သည်။
ထုတ်ကုန်များကို6ကြိမ် (စိမ်ထားသောနို့အချိုရည် 1.5ml နှင့် ပန်းသီး 1.5ကီလိုဂရမ်) ခွဲရန် လိုအပ်ပါသည်။
19. 00. >ထက် နောက်မကျစေဘဲ ညစာစားနိုင်ပါသည်။
Buckwheat သည် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အရေးကြီးသော ဒြပ်စင်များနှင့် ဗီတာမင်များကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး ကျန်းမာရေးကို တိုးတက်စေသည်။ဟောလိဝုဒ်ကြယ်ပွင့်အများစုသည် ပုံသဏ္ဍာန်ကောင်းစေရန်အတွက် kefir-buckwheat ကို ၃ ရက်ကြာ အသုံးပြုကြသည်။
kefir-buckwheat အစားအစာ၏ဒုတိယအမည်မှာ "Hollywood" ဖြစ်သည်။သူမကူညီသည်-
သုံးရက်အတွင်း6ကီလိုဂရမ်ကိုဖယ်ရှားပါ။
ဆံပင်ကို ပြန်လည်တောက်ပစေပြီး အသားအရေကို တောက်ပစေပါသည်။
အဆိပ်အတောက်များနှင့် အခြားအပျက်အစီးများကို ဖယ်ရှားပါ။
3 ရက်အတွက် kefir-buckwheat အစားအစာမီနူး (နံနက်စာ၊ သရေစာ၊ နေ့လည်စာ၊ နေ့လည်စာ၊ ညစာ)
buckwheat 100 ဂရမ်;
1 st ထုတ်ကုန်;
buckwheat 200 ဂရမ်;
ထုတ်ကုန် 1 ခု။
buckwheat 100 ဂရမ်, အစိမ်းရောင်ပန်းသီး;
kefir 200 ဂရမ်။
buckwheat ဂျုံယာဂု 200 ဂရမ်;
ထုတ်ကုန် 200 ml ကို;
buckwheat 100 ဂရမ်။
ဂျုံယာဂု 100 ဂရမ်။
ဤနည်းဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချရန်အတွက် buckwheat ကို ဤနည်းဖြင့် ချက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ပွက်ပွက်ဆူနေသော ရေနှစ်ဖန်ခွက်ဖြင့် သီးနှံတစ်ခွက်ကို လောင်းချပြီး တစ်ညလုံး ထုပ်ပိုးလိုက်ပါ။မနက်မိုးလင်းတော့ ယာဂုအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ဆား၊ သကြားနှင့် အခြားဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ မသုံးပါနှင့်။
kefir အစားအစာသည် အံ့သြဖွယ်ရလဒ်များကို ပေးစွမ်းသောကြောင့် ၎င်းသည် လူတို့ထံမှ အပြုသဘောဆောင်သော သုံးသပ်ချက်များကို ရရှိခဲ့သည်။ဤနည်းလမ်းသည် ပိုနေသောကိုယ်အလေးချိန်ကို တိုက်ဖျက်ရန်၊ အစာခြေစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေရန်၊ အစာခြေလမ်းကြောင်းကို ပုံမှန်ဖြစ်စေရန်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ဇီဝဖြစ်စဉ်များကို အရှိန်မြှင့်ရန် ကူညီပေးသည်။
ငယ်ငယ်က ပန်းတွေကို နှုတ်ပြီး ပန်းပွင့်တွေကို ကိုက်ဖြတ်ပြီး မင်းကြိုက်တဲ့ ကောင်လေးက မင်းကို ချစ်လား မချစ်လား ဆိုတာ နားလည်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာ မှတ်မိလား ။ယခု သင်လည်း အလားတူလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော် လောင်းကြေးများ ပိုများသည်- သင် ကိုယ်အလေးချိန် ကျသွားမလား၊အစားအသောက် ၆ ပွင့်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။